အပျင်းပြေဖတ်စာ - Clicker Nux
အပျင်းပြေဖတ်စာ Reviewed by နှင်းလူ on 11:16:00 AM Rating: 5
တစ်နေ့တစ်၌ … ကျွန်ုပ်လည်း ပျင်းပျင်းရှိသည်နှင့် (မှတ်ချက်။ ။“ပျင်းပျင်း" ဆိုသည်မှာ လူအမည်မဟုတ်ပါ) အပျင်းပြေရန်အလို့ငှာ facebook ကိုဖွင့်ကြည့်မိလေ၏။ ပြီးလျှင် အများသူငါ အပျင်းပြေတင်ထားကြလေသော စာများ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ သတင်းများ၊ အတင်းများ၊ အဖျင်းများ စသည်တို့ကို 'ပျင်းရိလေးလံစွာဖြင့်' လိုက်လံဖတ်ရှုမိလေ၏။
ကောင်မလေးတစ်ယောက်က ပုံတစ်ပုံတင်ကာ ဤသို့ရေးထားလေ၏ …
"ခစ်ခစ် … ဒီနေ့ အမျိုးတစ်ယောက်ဆုံးလို့ အသုဘလိုက်ပို့တုန်းက ရိုက်ထားတာလေ … လှလားတိဝူး … ခစ်ခစ်"။
ဒါကိုပဲ မောင်နှာခေါင်းကြီးများက Like ဗုံးကြဲကာ နှာသံလေးများဖြင့် ကွန်မန့်များပေးကြသည်ကိုတွေ့ရ၏ ...
” အော်... ခေးရယ်... နောက်ခံအုတ်ဂူဖွေးဖွေးလေးတွေနဲ့ အရမ်းလှတာပဲ ...”
စသည်ဖြင့် …. စသည်ဖြင့် …
အခြားဘဲတစ်ကောင်ကလည်း (မှတ်ချက်။။ "ဘဲ" ဟုဆိုသော်လည်း တစ်ကယ့်"ဘဲ" မဟုတ်ပါ) အထင်ကြီးစရာကောင်းလောက်အောင်ပင် ဤသို့ရေးတင်ထားပြန်လေ၏ …
"ကိုယ်နဲ့ ဇာတ်လမ်းပြတ်သွားတဲ့ ကောင်မရဲ့ ဘဲအသစ်က ကိုယ့်လောက်မချောဘူးဆိုတာသိရတော့ ဝမ်းသာတာကွာ …”၊ "ဝမ်းသာလုံးဆို့ပြီး သေသွားလဲ အေးသာပဲကွာ"
ဟူသော ကွန်မန့်ကိုတော့ ပျင်းရိနေသောကြောင့် မပေးဖြစ်လိုက်ပါ။
ထို့အပြင် … “အချစ်ဆိုတာ …. ဧဒင်ဥယဥ်ကြီးထဲက …”ဟု အစချီ၍လည်းကောင်း၊ "ဘဝဆိုတာ သောက်နေတဲ့ ခွက်ထဲ … ဘာအကောင်ပြုတ်ကျ ဆိုလား ...” ဟူ၍လည်းကောင်း၊ "ဒီနေ့ ထူးထူးခြားခြား အိမ်သာသုံးခါတောင် တက်ဖြစ်တယ် …” ဆိုသည်က တစ်မျိုး ...၊ "ယူနီကုဒ်ဆိုတာ … ဘာညာဘာညာ" ဆိုသည်က တစ်ဖုံ၊ "တို့ပြည်နယ်က တိုက်ပွဲတွေ ချက်ချင်းရပ် … (တခြားပြည်နယ်က တိုက်ပွဲတွေကျတော့ ထည့်မပြော ...)” ဆိုသည်က တစ်မယ် … စသည်ဖြင့် … စသည်ဖြင့် …. ပျင်းရိငြီးငွေ့စရာကောင်းလောက်အောင် အကြောင်းအရာများက စုံလင်လှချေ၏။
သို့နှင့် တစ်နေရာအရောက်သော် အောက်ဖော်ပြပါ ထူးခြားဆန်းကြယ်သည့် စာတစ်ကြောင်းကြောင့် လေးလံထိုင်းမှိုင်းစွာ မပွင့်တပွင့် ဖွင့်ထားသော ကျွန်ုပ်၏ မျက်လုံးအစုံမှာ 'အတန်ငယ်' ပြူးကျယ်သွားရလေ၏။
သေချာသည်မှာ ထိုစာကိုဖတ်မိသူ မည်သူမဆို ပထမသော် တဒင်္ဂ ကြောင်သွားပေလိမ့်မည်။ ပြီးလျှင် အလိမ်အညာခံလိုက်ရကြောင်းသိသွားကာ ဒေါဖောင်းကြပေလိမ့်မည်။ ပြီးလျှင် … ထိုစာရေးသူအား ကျိန်ဆဲချင် ဆဲမိလိမ့်မည်၊ သို့မဟုတ်လျှင်လည်း ရှက်ရမ်းရမ်းကာ ရယ်ကောင်း ရယ်လိမ့်မည်။
ယခုဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်၏ မိတ်ဆွေများအနေနှင့် ထိုစာတစ်ကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားလာကြပြီဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သိချင်စိတ်ထက်သန်နေသော သင်တို့၏ ဆန္ဒကို ကျွန်ုပ် အချိန်မဆွဲလိုတော့ပြီဖြစ်၍ ထိုထူးခြားဆန်းကြယ်သော စာတစ်ကြောင်းကို ဖော်ပြပေးပါအံ့။
“ဟုတ်ကဲ့ …. ကျွန်တော်အခုလို ပျင်းပျင်းရိရိနဲ့ ပေါက်ကရရေးထားတဲ့ စာကို အပျင်းပြေဖတ်ပေးကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအလွန်တင်ရှိပါကြောင်း အပျင်းပြေပြောလိုက်ပါရစေ … အဟီး" …
Clicker Nux (ငထွန်း)
Khin Shwe San June 8, 2016 at 10:37 AM
အပျင်းပြေဖတ်ရန် ရေးပေးတာကို ကျေးဇူး
"ကျနော် သို့မဟုတ် တိမ်တွေ"
"အဲ့ဒီနေ့က မရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကဗျာ ..."